ငါးမကျြစိ (သို့မဟုတျ) အသားမာ သတျနညျး – Askstyle
ငါးမကျြစိ (သို့မဟုတျ) အသားမာ သတျနညျး
ဒီရောဂါဟာလည်း လူနှင့် တိရိစ္ဆာန်​များ၌ ဖြစ်တတ်ပြီး ခံစားရခက်တဲ့ ရောဂါတစ်မျိုးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။အမှန်တကယ်တော့ ဒီရောဂါဟာ အမြစ်တွယ်တတ်တဲ့ ပိုးတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုရောဂါဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ အချို့ဆိုရင် ဆရာဝန်တွေနဲ့ပြသ၍ ခွဲထုတ်ပစ်ကြပြီး ပျောက်ကင်းသွားတဲ့လူ ရှိသလို မပျောက်ကင်းတဲ့လူလည်းရှိပါတယ်။
အခု ကျွန်တော် ပြောပြမှာက အိမ်တွင်းကုထုံးဖြင့် လွယ်ကူစွာ လုံးဝပျောက်ကင်းသွားအောင် ကုသတဲ့နည်း ဖြစ်ပါတယ်။သဘာဝဆေးနည်းတွေ အများကြီး ရှိတဲ့အထဲမှ အကောင်းဆုံးနဲ့ လက်တွေ့(90%)ပျောက်ကင်းစေမည့် ဆေးစွမ်းကောင်းတလက်ကို ကျွန်တော် မောင်ခါး ဖော်ပြပေးပါ့မယ်။စိတ်မပူပါနဲ့ ဆရာ ခါးခါးနဲ့တွေ့ရင် အမြစ်ပါထွက်သွားစေရမယ် သက်လား….
ပုံမှာပြသထားတဲ့အပင်ရဲ့အမည်က အင်္ဂလိပ်လို(Calotropis Procera)လို့ခေါ်ပါတယ်…မြန်မာလိုဆိုရင်တော့ မုရိုးပင်(သို့)ငဖြူကြီးပင်ဟု ခေါ်ဆိုပါတယ်။ဒေသအလိုက် အမည်နာမ ကွဲလွဲနိုင်ပါတယ်။အပွင့်မှာအဖြူပွင့်ပင်ရှိသလို ပန်းရောင်ပွင့်အနီရောင်ပွင့်အပင်လည်းရှိပါတယ်…ဒါပေမဲ့ အပင်အားလုံးဆေးဖက်ဝင်ပါတယ်၊အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။
အသုံးပြုပုံက~မိမိ၏ ခြေ/လက်မှ ငါးမျက်စေ့(သို့)အသားမာရဲ့အမြစ်ကို သွေးထွက်အောင် ထိုးဆွပြီး မုရိုးပင်(သို့)ငဖြူကြီးပင်မှ ထွက်ရှိသော အဖြူရောင် အစေး(milky-white sap)ကို အသားမာရဲ့အမြစ်အတွင်းထဲသို့ စိမ့်ဝင်သွားအောင် ထည့်ပြီး ၀ါဂွမ်းစလေးဖြင့် ပိတ်၍ လေလုံအောင် စည်းပေးထားလိုက်ပါ။နေ့စဉ် မနက်/ည ဂရုတစိုက် ပြုလုပ်ပေးပါက တစ်ပတ်အတွင်း အမြစ်ပြတ် ပျောက်ကင်းသွားစေရမည်။
မုရိုးပင်ဟာ ဘယ်လောက်အထိ့ ဆေးဖက်ဝင်သလဲဆိုရင် အရွက်ကို ဆုံထဲ၌ထည့်ထောင်း၍ အရိုးအက် /အရိုးကျိုးတဲ့နေရာများ၌ အုံ၍ ကြပ်စည်းပေးထားပါက အရိုးကိုပြန်ဆက်စေပါတယ်။အရွက်ကို ပြုတ်စား သုပ်စား လို့လည်းရပါတယ်။
ငါးမျက်စေ့(သို့)အသားမာကို ပျောက်ကင်းအောင် အခြားသောနည်းလမ်းများဖြင့် ကုသလို့ရပါသေးတယ်..
ကြက်သွန်နီဥကို အခွံခွာ၍ ညက်သွားအောင်ထောင်းပြီး ငါးမျက်စေ့ပေါ်သို့ အုံထားပေးပါက ပျောက်ကင်းသက်သာစေပါတယ်။
ကြက်သွန်အဖြူကိုလည်း ထောင်း၍ အုံထားပေးပါက ပျောက်ကင်းသက်သာစေပါတယ်။
လတ်ဆတ်သော သင်္ဘောသီးအစိမ်းတစ်လုံးကို ထက်ခြမ်းခွဲ၍ ထွက်ရှိလာသော အစေးကို ငါးမျက်စေ့အနာထဲသို့ စိမ့်ဝင်အောင်ထည့်ပေးပြီး ဂွမ်းစဖြင့် ပိတ်၍ စည်းထားပေးပါ။
ကြက်ဆူဆီကို ထည့်ပေးရင်ဖြင့် ငါးမျက်စေ့အနာကို ပျောက်ကင်းစေပါတယ်။
ဆံပင်သန်မာအောင်လိမ်းတဲ့ Vitamin E လို့ခေါ်တဲ့ ဆီကို ထည့်ပေးပါကလည်း ပျောက်ကင်းပါတယ်။
ရှာလကာရည် ကို ထည့်ပေးခြင်းဖြင့်ပျောက်ကင်းစေပါတယ်။
နနွင်း(ခေါ်)ဆနွင်းအမှုန့်ကို ထည့်သိပ်ပေးထားခြင်းဖြင့်လည်း ပျောက်ကင်းစေပါတယ်။
ရေနွေးပူပူထဲသို့ ဆားများများထည့်၍ ငါးမျက်စေ့သွေးထွက်လာသည့်အထိ့ဆွကာ အနာကို ရေစိမ့်ပေးထားခြင်းဖြင့်လည်း ပျောက်ကင်းစေပါတယ်။
ငါးမျက်စေ့အသားမာကို သွေးထွက်အောင်အမြစ်များကုတ်ထုတ်၍ ဆိုဒါအမှုန့်ကို သိပ်ထည့်ပေးပါက ပျောက်ကင်းစေပါတယ်။
နွယ်ချိုအမြစ်ကို ထောင်း၍ အနာပေါ်သို့ အုံပေးထားခြင်းဖြင့်လည်း ငါးမျက်စေ့(သို့)အသားမာရောဂါကို ပျောက်ကင်းစေပါကြောင်း ကျွန်တော် ဘ၀ခါးခါးက ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Credit – ဘ၀ခါးခါး
ဒီရောဂါဟာလညျး လူနှငျ့ တိရိစ်ဆာနျမြား၌ ဖွဈတတျပွီး ခံစားရခကျတဲ့ ရောဂါတဈမြိုးလညျး ဖွဈပါတယျ။အမှနျတကယျတော့ ဒီရောဂါဟာ အမွဈတှယျတတျတဲ့ ပိုးတဈမြိုးဖွဈပါတယျ။
ဒီလိုရောဂါဖွဈပွီဆိုတာနဲ့ အခြို့ဆိုရငျ ဆရာဝနျတှနေဲ့ပွသ၍ ခှဲထုတျပဈကွပွီး ပြောကျကငျးသှားတဲ့လူ ရှိသလို မပြောကျကငျးတဲ့လူလညျးရှိပါတယျ။
အခု ကြှနျတျော ပွောပွမှာက အိမျတှငျးကုထုံးဖွငျ့ လှယျကူစှာ လုံးဝပြောကျကငျးသှားအောငျ ကုသတဲ့နညျး ဖွဈပါတယျ။သဘာဝဆေးနညျးတှေ အမြားကွီး ရှိတဲ့အထဲမှ အကောငျးဆုံးနဲ့ လကျတှေ့(90%)ပြောကျကငျးစမေညျ့ ဆေးစှမျးကောငျးတလကျကို ကြှနျတျော မောငျခါး ဖျောပွပေးပါ့မယျ။စိတျမပူပါနဲ့ ဆရာ ခါးခါးနဲ့တှရေ့ငျ အမွဈပါထှကျသှားစရေမယျ သကျလား….
ပုံမှာပွသထားတဲ့အပငျရဲ့အမညျက အင်ျဂလိပျလို(Calotropis Procera)လို့ချေါပါတယျ…မွနျမာလိုဆိုရငျတော့ မုရိုးပငျ(သို့)ငဖွူကွီးပငျဟု ချေါဆိုပါတယျ။ဒသေအလိုကျ အမညျနာမ ကှဲလှဲနိုငျပါတယျ။အပှငျ့မှာအဖွူပှငျ့ပငျရှိသလို ပနျးရောငျပှငျ့အနီရောငျပှငျ့အပငျလညျးရှိပါတယျ…ဒါပမေဲ့ အပငျအားလုံးဆေးဖကျဝငျပါတယျ၊အသုံးပွုလို့ရပါတယျ။
အသုံးပွုပုံက~မိမိ၏ ခွေ/လကျမှ ငါးမကျြစေ့(သို့)အသားမာရဲ့အမွဈကို သှေးထှကျအောငျ ထိုးဆှပွီး မုရိုးပငျ(သို့)ငဖွူကွီးပငျမှ ထှကျရှိသော အဖွူရောငျ အစေး(milky-white sap)ကို အသားမာရဲ့အမွဈအတှငျးထဲသို့ စိမျ့ဝငျသှားအောငျ ထညျ့ပွီး ဝါဂှမျးစလေးဖွငျ့ ပိတျ၍ လလေုံအောငျ စညျးပေးထားလိုကျပါ။နစေ့ဉျ မနကျ/ည ဂရုတစိုကျ ပွုလုပျပေးပါက တဈပတျအတှငျး အမွဈပွတျ ပြောကျကငျးသှားစရေမညျ။
မုရိုးပငျဟာ ဘယျလောကျအထိ့ ဆေးဖကျဝငျသလဲဆိုရငျ အရှကျကို ဆုံထဲ၌ထညျ့ထောငျး၍ အရိုးအကျ /အရိုးကြိုးတဲ့နရောမြား၌ အုံ၍ ကွပျစညျးပေးထားပါက အရိုးကိုပွနျဆကျစပေါတယျ။အရှကျကို ပွုတျစား သုပျစား လို့လညျးရပါတယျ။
ငါးမကျြစေ့(သို့)အသားမာကို ပြောကျကငျးအောငျ အခွားသောနညျးလမျးမြားဖွငျ့ ကုသလို့ရပါသေးတယျ..
ကွကျသှနျနီဥကို အခှံခှာ၍ ညကျသှားအောငျထောငျးပွီး ငါးမကျြစပေ့ျေါသို့ အုံထားပေးပါက ပြောကျကငျးသကျသာစပေါတယျ။
ကွကျသှနျအဖွူကိုလညျး ထောငျး၍ အုံထားပေးပါက ပြောကျကငျးသကျသာစပေါတယျ။
လတျဆတျသော သင်ျဘောသီးအစိမျးတဈလုံးကို ထကျခွမျးခှဲ၍ ထှကျရှိလာသော အစေးကို ငါးမကျြစအေ့နာထဲသို့ စိမျ့ဝငျအောငျထညျ့ပေးပွီး ဂှမျးစဖွငျ့ ပိတျ၍ စညျးထားပေးပါ။
ကွကျဆူဆီကို ထညျ့ပေးရငျဖွငျ့ ငါးမကျြစအေ့နာကို ပြောကျကငျးစပေါတယျ။
ဆံပငျသနျမာအောငျလိမျးတဲ့ Vitamin E လို့ချေါတဲ့ ဆီကို ထညျ့ပေးပါကလညျး ပြောကျကငျးပါတယျ။
ရှာလကာရညျ ကို ထညျ့ပေးခွငျးဖွငျ့ပြောကျကငျးစပေါတယျ။
နနှငျး(ချေါ)ဆနှငျးအမှုနျ့ကို ထညျ့သိပျပေးထားခွငျးဖွငျ့လညျး ပြောကျကငျးစပေါတယျ။
ရနှေေးပူပူထဲသို့ ဆားမြားမြားထညျ့၍ ငါးမကျြစသှေ့ေးထှကျလာသညျ့အထိ့ဆှကာ အနာကို ရစေိမျ့ပေးထားခွငျးဖွငျ့လညျး ပြောကျကငျးစပေါတယျ။
ငါးမကျြစအေ့သားမာကို သှေးထှကျအောငျအမွဈမြားကုတျထုတျ၍ ဆိုဒါအမှုနျ့ကို သိပျထညျ့ပေးပါက ပြောကျကငျးစပေါတယျ။
နှယျခြိုအမွဈကို ထောငျး၍ အနာပျေါသို့ အုံပေးထားခွငျးဖွငျ့လညျး ငါးမကျြစေ့(သို့)အသားမာရောဂါကို ပြောကျကငျးစပေါကွောငျး ကြှနျတျော ဘဝခါးခါးက ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
Credit – ဘဝခါးခါး